जिट्कोमार्फत कसरी जापान जान सकिन्छ ?
Sun, Aug 09, 2020 | 23:46:57 NST
प्रश्न : मैले एसएलसी पासको गरेको छु । कार्पेन्टर सम्बन्धि सीप छ मसँग । जिट्को मार्फत जापान जान सक्छु कि सक्दिन् ?
उत्तरः बिनोद केसी, महानिर्देशक बैदेशिक रोजगार बिभाग - जिट्को अलि फरक प्रकृतिको हो । यसबाट प्रशिक्षार्थी कामदारको रुपमा मात्रै जाने हो ।
यहाँ औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम गरिरहेको मान्छे त्यस्तै खालको औद्योगिक प्रतिष्ठानमा जिट्कोमार्फत जापान जाने हो ।
यो त्यति सजिलो छैन । तपाईंले कार्पेन्टरको काम जानेको छु भन्नु भएको छ । तपाईंले आफ्नो क्षमता अझ बढाउनुहोस् । हामीले १ सय भन्दा बढि मेनपावरमार्फत जापान जिट्कोमार्फत काम गर्न जानका लागि तोकिदिएका छौं । यो चाँही तपाईंले हाम्रो वेवसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ ।